समवेदना – मझेरी डट कम
नेपाली साहित्यका मूर्धन्य व्यक्तित्व रमेश विकलको निधनको खबरले मझेरी परिवारलाई स्तब्ध तुल्याएको छ। यस दुखद घडीमा हामी उहाँको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा समवेदना प्रकट गर्दछौं।
श्रद्वाञ्जली अर्पण गर्नुहोस्
14 thoughts on “समवेदना”
अतिथि December 17, 2008 at 2:56 pm
its end of an era.
preeti December 17, 2008 at 4:00 pm
साहित्यिक फाँटमा अपूर्णनीय
साहित्यिक फाँटमा अपूर्णनीय क्षति । यो खबरले स्तब्ध तुल्यायो । उहालाई भेटेको हिजै हो जस्तो लाग्दैछ । He was very down to earth man I have ever met. उहाँको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा हार्दिक समवेदना ।
अतिथि December 17, 2008 at 6:21 pm
समाचार ले एक्दमै दुखित बनायो
समाचार ले एक्दमै दुखित बनायो ! वहाँ को भौतिक शरिरले विश्राम लिनु भयेपनी वहाँ को कृति हरुले कहिल्यै विश्राम लिने छैन , त्यो त जुगजुग सम्म हामी सवै माझ बाँचि रहने छ !!!
उहाँको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा समवेदना प्रकट गर्दछु !
akshaya December 17, 2008 at 10:22 pm
Feel very sorry to hear this
Feel very sorry to hear this news. भेट्ने अवसर त मिलेन तर बिकल जि को बिदाइमा दुखी हुने प्रसस्त क्षेण्हरु छन म सँग। अविरल बग्दछ इन्द्रावोति मलाई छुने कृति मध्यको एउटा हो। ईश्वर ले दिवङत आत्मा लाई चीर शान्ती प्रदान गरुन।
अतिथि December 18, 2008 at 12:31 am
रमेश विकलज्यूको आत्माको चीर
रमेश विकलज्यूको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा हार्दिक समवेदना ब्यक्त गर्न चाहन्छु।
DeepaK December 18, 2008 at 1:02 am
पुनर्जन्म यदि हुन्छ भने
पुनर्जन्म यदि हुन्छ भने नेपाली साहित्यको सेवा खातिर रमेश विकलको नेपालमै जन्म होस् । वहाँको निधनमा शोक सन्तप्त परिवारमा हार्दिक समबेदना छ !
अतिथि December 18, 2008 at 3:33 am
उसै पनि गरिव देश, अब झनै
उसै पनि गरिव देश, अब झनै साहित्यका अथक श्रष्टा समेत गुमाएर झन गरिव हुने भयो ।
उहाँको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा हार्दिक समवेदना ब्यक्त गर्न चाहन
अतिथि December 18, 2008 at 12:45 pm
यो दुख को घडीमा वहाँको
यो दुख को घडीमा वहाँको आत्माले चिर शान्ति प्राप्त गरोस् र परिवारजन ,इस्टमित्र, शुभचिन्तक, साहित्यिक स्रस्टा एबं समग्र नेपाली-जन मा परमेशवर ले धैर्य धारण गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गरुन् भन्ने कामना गर्दछु ।
अतिथि December 18, 2008 at 12:46 pm
प्रकाश पौडेल माइला
अतिथि December 19, 2008 at 11:12 am
घडीको सुइ र क्यलेन्डरका
घडीको सुइ र क्यलेन्डरका पानाहरु कहिले फर्किदैनन । सबै समय र सबै दिनहरुले एउटै खुशी पनि ल्याउन सक्दैन न त दु:खहरु ।
डिसेम्बर १७ ले मलाई जिबन भरिको पिडा छोडेर गयो । लग्भग १ बर्षा अगाडि तिरहोला मैले मित्रलाल पङेनीज्युको लेख पदेको थिए । “रमेश बिकल धुरुधुरु रुनुभयो ” शिर्शकमा प्रसँग थियो युबा हरुको बिदेश पलायन । त्यतीबेला पढे – अनी घडी को सुइ र क्यलेन्डरका पानाहरु सँगै भुले पनि
उहा जब १० तरिखमा अस्पताल भर्ना हुनुभयो – स्थिती निरन्तर जटिल बन्दैगयो – मलाई ती शब्दहरुले पोल्न थाल्यो । १८तारिख को उडान मा १८घन्टा मात्रको फासला थियो उडानको । अनी अरु केही घण्टा मात्रै बाँकी थियो प्यारो हजुरबुवाको अनुहार हेर्न र स्पर्श गर्न । तर अफ्सोच् त्यो दिन कहिले नआउने गरेर गयो मबाट । हजुरबुवाको म्रित-आत्माको चिर शन्तीको कामना !!!
अतिथि December 19, 2008 at 1:32 pm
खै के भन्नु र अब। विकलज्यूको
खै के भन्नु र अब। विकलज्यूको निधनको कुरा सुनेपछि भन्ने वाक्य नै हरायो क्यार मेरो त। त्यसैले अलिक ढिलै उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दैछु यहाँनेर। अनि उहाँकै जन्म नेपालमै भइसकेको होस् भन्छु है म त। पुनर्जन्म हुन्छ भने बरु साहित्यिक फाँटमा अरु थुप्रै विकलहरु देखा पर्दै जाउन्।
अतिथि December 20, 2008 at 12:16 am
अतिथि December 21, 2008 at 8:19 am
uha ka kriti haru dhary
uha ka kriti haru dhary ramra thaya study garda pani dhary kura janna paintho uhakay kriti study garara
malai pani kai garu jasto lagtho
ma uha ko nidhan prati sary dukhi chhu
Manoj kafle July 6, 2009 at 8:38 am
र मा कुवैत वाट भएको नाताले सबै कुवैत का नपाली हरु इस्टमित्र, शुभचिन्तक, साहित्यिक स्रस्टा को तर्फबाट पनि
शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा हार्दिक समवेदना ब्यक्त गर्न चाहन्छु।
मनोज काफ्ले “मनसुन”